Tahriibayaal Afrikaan oo Soomaali ay ku jirto oo lagu rasaaseeyey Dalka Liibiya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Tahriibayaal Afrikaan oo Soomaali ay ku jirto oo lagu rasaaseeyey Dalka Liibiya
Tahriibayaal Afrikaan oo Soomaali ay ku jirto oo lagu rasaaseeyey Dalka Liibiya
Liibiya(SNTV) Wararka laga helayo Dalka liibiya ayaa sheegaya in khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashey Rasaas lagu furay dad Tahriibayaal Afrikaan ah oo Soomaali ay kujirto,kuwaasi oo ka soo baxsaday xabsi kuyaalay dalkaasi.
Muqalisiin ku sugan Dalka Liibiya ayaa lagu soo waramaya in ay rasaas ku fureen illaa 100 qof oo tahriibayaal ah,kuwaas oo isku dayay in ay ka baxsadaan meel lagu hayay,waxaana ka dhashey Khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Goobta ay wax ka dheceen ayaa ah magaalada Bani Walid ee Dalkaasi Liibiya,waxaana ku dhimatay 15 qof oo kamid ah dadkaasi baxsadka ahaa,iyadoo sidoo kale lagu dhaawacay illaa 25 qof sida ay soo tabisay hay’adda dhaqaatiirta aan xudduuda lahayn ee MSF oo war ka soo saartay dhacdadaasi.
War ay soo saartay Hay’adda MSF ayaa lagu sheegay in dadka waxyeelada soo gaartay ay ka midyihiin Soomaali, dad u dhalashay dalalka Eritrea iyo Itoobiya.
Wadanka Liibiya ayaa noqotay dalka ugu badan ee laga tahriibiyo dadka doonaya in ay galaan Qaaradda Yurub,hase ahaatee waxaa ay dadku kala kulmaan dhibaatooyin xooggan tahriibkaasi.
Warka hay’adda ayaa intaasi ku daraya in kooxo kala duwan ay kala iibsadeen tahriibayaasha, iyada oo meel lagu haystay muddo 3 sanadood ah,Balse markii ay u adkaysan waayeen ayay isku dayeen in ay baxsadaan, xilligaas oo rasaasta lagu furey.
Kumanaan muhajiriin Afrikaan ah oo Soomaali kujirto ayaa ku dhimatay Badda loo yaqaano Mediterraneanka oo isku xirta Afrika iyo Yurub,iyagoo baadi goobaya sidii ay u heli lahaa yeen Nolol ka duwan midda dalkooda kajirta.
Previous articleAqalka Sare oo lacag ugu deeqay qaar kamid ah dadka ay saameeyeen Fatahaadaha iyo Duufaanada ku dhuftay Dalka
Next articleKusimaha Ra’iisul Wasaaraha oo ka qeyb galay munaasabad uu xilka kula wareegay wasiirka cusub ee Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha